သံတမန်နည်းကျကျ နည်းဗျူဟာရှိရှိ ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်း
ဤအစီအစဉ်တွင် သံတမန်နည်းကျကျ နှင့် နည်းဗျူဟာရှိရှိ ဆက်ဆံပြောဆို၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ရန်၊ မျှော်မှန်းရလဒ်များကို ရယူနိုင်ရန် သင့်ကို ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် ရပ်တည်ရာတွင် သူများကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ထိရောက်အောင်မြင်မှုသာရှိခဲ့ပါက ၄င်းသည် သင်၏ အများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီး၊ ထိုကဲ့သို့ ဆက်ဆံရေးမှတစ်ဆင့် ကောင်းကျိုးရလဒ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါမည်။ သံတမန်နည်းကျကျ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း စွမ်းရည်များသည် သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရုံသာမက လူအများကလည်း သင့်ကို နှစ်ခြိုက်လာစေနိုင်ပါသည်။
သင် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် အများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိအောင် ကြိုးစားပြီး ရလိုသော ရလဒ်များကို လိုက်၍ သင်ပေးချင်သော အချက်အလက်များ၏ အဓိကအကြောင်းအရာကို ချိန်ညှိပါ။ သင့်ကို အလွယ်တကူ စိတ်ပျက်စေသော အရာများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားပြီး ဒီအတိုင်းပြန်လည်ပြောဆိုခြင်း (React) ထက် ထိရောက်သော တုန့်ပြန်ပြောဆိုမှု (Response) ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ အဝေဖန်ခံရသည့်အခါ တည်ငြိမ်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။ ဖိအားများ နှင့် ကြုံလာရသည့်အခါ မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခမျိုးမဖြစ်အောင် တည်ငြိမ်အောင်နေပါ။
သင့်အတွက် မတွေ့ကြံုဖူးသေးသည့် အခြေအနေများ သို့မဟုတ် သင့်ကို အခက်တွေ့စေသည့်အခြေအနေများနှင့် တွေ့ကြံုရသည့်အခါ လျင်လျင်မြန်မြန် နှင့် လှလှပပ ဖြေရှင်းလာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင် လူအများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိ၊ ရိုးရိုးသားသား ပြောဆိုခြင်း၊ သင့် စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ အပြုသဘောရှိရှိနှင့် ဝေဖန်ခြင်း နှင့် အဝေဖန်ခံခြင်း၊ သင့်ကိုယ်သင် အင်အားကြီးမားသော (သို့သော် အများကို အန္တရာယ်မပြုသော)သူအဖြစ် ချပြခြင်း စသည်တို့ကို သိရှိနားလည်လာပါလိမ့်မည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ သူများကို မတိုက်ခိုက်ဘဲ၊ ပဋိပက္ခမဖြစ်စေသော အပြုအမူနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤသင်တန်းသည် သင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အားသာချက် အားနည်းချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သဘောတူလက်ခံနိုင်လောက်အောင် ငြင်းဆိုတတ်ရန် သင်ယူရပါမည်။ ခက်ခဲသော အခြေအနေများကို သံတမန်နည်းကျကျ နှင့် ယုံကြည်မှုရှိရှိ့ ရင်ဆိုင်ရဲပြီး အားကောင်းသော၊ သဘောထားမျှတသော ခေါငး်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် သင့်ရဲ့ပုံရိပ်ကို တည်ဆောက်ပါ။
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 06/18, 06/19
ကြာချိန်: SPECIAL OFFER – TRAIN ONLINE NOW & IN-PERSON LATER! Due to Covid-19, all attendees can get started with FREE LIVE-ONLINE training right away! Register Now for this in-person course and you’ll receive access to the online equivalent (value $1,695)Online programs held will be Four 3-hour sessions, Meets onceaweek. Four 3-hour sessions Dates Available: April2-23 from 9:00am to 12:00pm EST on Thurs. or April 27 - May 18 from 2:00pm to 5:00pm EST on Mon. or June2to June 23 from 10:00am to 1:00pm EST on Tues. . Any program can be rescheduled. You can choose ANY class dates later this year for your in-person, 3-consecutive day class. View alternate dates in Tampa at https://www.dalecarnegie.com/en/courses-v2/197?topics=36&types=In-Person&franchise_id=43655
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 09/03, 09/04
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 08/13, 08/14
ကြာချိန်: Runs2Consecutive Days
ကြာချိန်:2consecutive days
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 07/16, 07/17
ကြာချိန်: Mon, Tue2consecutive days
အချိန်: 8:30 AM - 5:00 PM
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 09/10, 09/11
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 12/17, 12/18
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 11/19, 11/20
ကြာချိန်: Thur, Fri2Consecutive Days
အချိန်: 8:30 AM - 5:30 PM
ကြာချိန်:2Tage Montag und Dienstag
ကြာချိန်: Two Consecutive Days 12/14, 12/15